Home Wararka Dibada TV-ga Aljazeera oo Maxkamadda ICC u gudbinaya Dacwad ka dhan ah Israel.
TV-ga Aljazeera oo Maxkamadda ICC u gudbinaya Dacwad ka dhan ah Israel.
Teleefishinka Aljazeera ayaa sheegay in Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ee loosoo gaabiyo ICC uu u gudbinayo Dacwad ka dhan ah Israel kaddib markii si bareer ah ay u toogteen Wariye Shereen Abu Aqleh 11-May-2022.
Aljazeera oo soo bandhigtay warbixinno iyo muuqaallo beeninaya sheegashada Israel ee ah in rabshado ay ka dhaceen goobta lagu toogtay suxufiyaddaan ayaa sheegay in Maxkamad uu la korayo si caddalad loogu helo Shireen.
“Aljazeera Media Network oo kaashanaya kooxda sharciga u qaabilsan waxa uu diyaariyay dacwad ka dhan ah Israel kaddib markii ciidankooda ay toogteen Wariye Shireen Abu Aqleh 11kii May 2022 oo kasoo warrameysay meel u dhaw Xerada Qaxootiga Jenin” ayaa lagu yiri War kasoo baxay Maamulka TV-ga Aljazeera.
Teleefishinka ayaa cuksaday qodob xusaya in dilka noocaan oo kale ah uu yahay dambi lagu maxkamadeyn karo ciddii geysatay maadaama Shireen ay ku howlaneed gudashada waajibaadka shaqo ee ah soo tebinta dhacdooyinka iyo xaaladaha jira.
“Qodobka 8aad ee xeerka Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada waxa uu muujinayaa in haddii la dilo ama la jirdilo Suxufiyiinta ka howlgalla aagagga dagaalka ama dhul la isku heysto in uu yahay dambi dagaal oo ciqaab ka dhalaneysa” ayaa lagu yiri qoraalka Aljazeera.
Israel ayaa diiday in baaris madaxbannaan lagu sameeyo dilka loo geystay Wariye Shireen Abu Aqlah, ehelkeeda ayaa dalbaday in caddaalad ay u helaan Gabadhooda oo u dhimatay dhaawac halis ah oo ay u geysteen Ciidanka Yuhuudda.
Previous articleKulan Xasaasi ah eey isku yimaadeen Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ku Matala Beelaha Xawaadle ayaa kaga arinsanayay xaquuqda ka maqan DFS iyo DG Hir-Shabeelle (wax badan ka ogoow)
Next articleIOM: ku dhawaad 600 oo tahriibayaal ah oo lagu la’ yahay Xeebaha Liibiya & Tunisia.
Daawo: Taliyihii hore qeyb 27aad oo ka hadlay dagaalkii beesha Xaruun...
Miiska Waan Fadhinaa Balse Waxtar ma lihin miyaa?
kamarada: Maxaad ka taqaanaa warshaddii sameyn jirtay Sunta halista ah ee...